Iindaba kunye neNguqulelo yokuThuthwa kweeNkonzo eBasel - Zurich
Uhambo lweSixeko kunye nokujonga indawo kunye neTransfer Service yaseBasel
06 UTshazimpuzi 0
I-shuttle ye-Airport, Basel, moya Shuttle, inkonzo yokuthuthwa, sekhefu emzini
Hayi nje abathengi bethu ukusuka kwishishini - iintsapho kunye namaqela thina ninikela 7 abantu amathuba ukuhlala obutofotofo kwenye ekungena zethu classically unomtsalane. Ngokukodwa kwiinyanga zasehlotyeni, iBasel ithatha abavakhenkethi abaninzi abafuna ukufumana izixeko ezikufutshane eSwitzerland, eFransi naseJamani. Ngenxa yendawo yethu ebalulekileyo singenza uhambo lwakho lweedolophu lukhululekile kunokwenzeka. Uninzi abathengi ishishini lethu ungathanda ukusebenzisa thuba ukudibanisa ishishini kunye necandelo labucala kwaye babase kwiindawo zethu abanamava siphelekwe kude kumaxhala akhawunti nezihlwele zikarhulumente elalini
I-BASELWORLD 2018 - Hamba ukhululekile kunye ne-Transfer Service yaseBasel
I-shuttle ye-Airport, Basel, Baselworld, Inkonzo yokudlulisa
Kunyaka ngamnye entwasahlobo, iBasel yindlu ngeveki kwiinkampani ze-1,800 ezibonisa ukubukela kwazo kunye neengubo kwiBaselword. Abaququzeleli bale mfuneko ebalulekileyo yezorhwebo abazange bakhononde ngokubaluleka kweendwendwe. Abathengisi be-100,000 kunye nabameli beefama zindwendwe kulindeleke ukuba baye kwiHlabathi yeHlabathi yeeWatch kunye neeJellery. Ngo-Matshi i-22, i-2018 amasango efanelekileyo aya kuvula iindwendwe. Ngomqhubi wakho ku-BASELWORD - Ukuthunyelwa kweeNkonzo zaseBasel I-EuroAirport yaseBasel yimizuzu embalwa nje kwimiboniso. Kodwa ngokuqinisekileyo - njengamanye amaninzi
Basel, moya Shuttle, inkonzo yokuthuthwa
I-BASELWORLD 2018 - Ikulungele ukuhamba ne-Transfer Service yaseBasel
I-shuttle ye-Airport, Baselworld, Ukuthunyelwa kweenqwelo, Ukutshintshiselwa kwezoqoqosho, Inkonzo yokudlulisa
Yonke intsuku yaseBasel isingatha kwiinkampani ze-1800 ezibonisa ukubukela kwazo kunye neendalo zezinto zokugcoba kwi-Baselword. Akukho mfuneko yokukhalaza malunga nenani leendwendwe kule ndawo ebalulekileyo yokurhweba, kuba njengoko ngonyaka, i-2017 kulindeleke ukuba imelwe ngabadayisi be-100.000 kunye nabameli be-World Watch kunye ne-Show Jewelryery. Nge-22 Matshi i-2018 amasango e-fairly will open for the flow of visitors. Ukuhamba ngokukhawuleza kwi-BASELWORD - I-Basel ye-Transfer Service yethu I-EuroAirport yaseBasel yimizuzu embalwa nje ngemoto evela kwisiko lomboniso. Kodwa ngokuqinisekileyo ufuna - njengabanye abahamba ngezoshishino - umbonisi wombonisi
Inkonzo yokudlulisa i-360 ° yeendwendwe zeehotele eBasel
Sinikela ngenkonzo ekhethekileyo njengendwendwe yehotele kwisixeko sethu esihle saseBasel. Sinikeza ngenkonzo epheleleyo ngexesha ukuhlala e Basel sinikele ingqalelo kwizinto ezibaluleke - nokuba ubuke kwi Basel kwidolophu endala, utyelelo kwi Kunstmuseeum okanye intlanganiso lakho ishishini. Ukuthunyelwa kwenkonzo ngokuthe ngqo kwiSango leMoto okanye kwiHhovisi Siya kukunyamekela xa ufika eBasel kwisikhululo se-moya okanye kwisikhululo sezitimela. Silindele wena kwisigxina sokufika kwaye sikhuphe uhambo lwakho ngokukunceda ngemithwalo yakho kwi-limousine yethu. Ukususela apho siyahamba
Basel, moya Shuttle, inkonzo yokuthuthwa, Zuerich
Ngokukhuselekileyo kunye nexesha ukufika - inkonzo yakho transfer premium ufuna bakhuphisane ukuze ishishini okanye kwendiza yakho kwaye ufuna ukubona ukuba phambi kokuba ahambe inkqubo izwakale kweshatile ethembekileyo moya? umqhubi wethu uya pick up nomnye ekungena zethu ezikumgangatho ophezulu, zigcinwe kakuhle isiJamani ukusuka ekhaya, kwi-ofisi okanye esangweni moya. Kakade siya kukunceda ngomthwalo. Kakade ke, ukuba idiza yakho ifike emva kwexesha, asiyi kukuyeka kodwa silinde ukufika kwakho. Ufike ngokukhululekile kwaye ukhululekile kwindawo ekuya kuyo Ininzi labagibeli bethu basebenzisa ukuthutha kwe-moya phakathi kweZilich Airport kunye ne-Euro